INTER MILAN VS SSC NAPOLI: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan! – Gool FM
(Milano) 11 Maarso 2018 – Waxaa caawa gegada San Siro isku fara saaraya labada kooxood ee Inter Milan vs SSC Napoli, iyadoo Napoli aysan ka caymanin khalad kale oo la mid ah midkii Roma, haddiiba ay rajo ka leedahay qaadista horyaalka Talyaaniga oo ay koobab badan u hurtay.
Dhanka Inter: Icardi iyo Miranda ayaa soo laabtay waxayna taasi ka dhigan tahay in Inter ay haysato dhamaanba laacibiinteedii. Waxaa kaydka ku noqonaya Ranocchia, halka daafaca ay garbaha buuxinayaan Cancelo iyo D’Ambrosio. Rafinha ayaa fursad safka 1-aad ah rajaynaya caawa.
Dhanka Napoli: Waxaa safka 1-aad kusoo noqonaya Hamsik oo safanaya daqiiqaddii 1-aadba, inta kale waa sidii caadiga iyo caadada ahayd oo ciyaartooydii dookha 1-aad ayaa safanaya. Waxaan loo yeerin Chiriches.
27 PADELLI, 46 BERNI, 21 SANTON, 29 DALBERT, 2 LISANDRO LOPEZ, 13 RANOCCHIA, 20 BORJA VALERO, 17 KARAMOH, 77 BROZOVIC, 23 EDER
1 RAFAEL, 22 SEPE, 11 MAGGIO, 62 TONELLI, 19 MILIC, 30 ROG, 37 OUNAS, 42 DIAWARA, 20 ZIELINSKI, 27 MACHACH, 99 MILIK
Boqor Salman oo garooka ugu weyn dunida ka dhisaya Iraq.....Ogow waxa ku galifay??